Le filimu "I epholile Don" - ingaphezu nje ngokuthi ubuciko. Lena a lifetime, ngesikhathi lapho izwe lokushintsha izinhlamvu, ubudlelwano babo, okunxanelekayo ukudala bese ugcine. Uma umqondisi livele lithathelwe nendumezulu inoveli Mihaila Sholohova ezingeni, udinga okungenani ugcine zonke ubuqiniso kanye umqondo jikelele. Uma ifilimu ukuskenwa sigxilisa umuzwa hhayi phansi kunabaphostoli abazalwa ngemva kokufunda inoveli, kuphephile ukusho ukuthi i-movie kuhlulekile. Uphenyo "epholile Flows Don" ifilimu abanakukwazi zixutshwe. Baningi abantu futhi eziningi imicabango yabantu. Kodwa kunento eyodwa ecacile - lokhu kuyinto isithombe esaqopha umlando.
umsebenzi omkhulukazi "epholile Flows Don" ihlanganisa ezihlukahlukene izenzakalo the First World War, October Revolution futhi kulwiwa. Lona ngesihluku kakhulu, iminyaka igazi yisiphepho mhlawumbe nezinguquko ezinkulu at Don. Sekuyisikhathi kanzima nelesabekayo, ngesikhathi umzalwane othile uya komunye umzalwane. Zonke amanani abangabantu ukhohlwe. Okuwukuphela linenzuzo ehlala njalo ngaso sonke isikhathi - uthando. Long, mnene, uthando kwaphakade Don Cossack UGregory Aksinya Melehova Astakhov.
Esiqintini umkhiqizo lichaza umlando we Cossack umndeni Melekhovo. Intambo ovamile enovelini ikhombisa idrama protagonist - Gregory Melehova, uthando lwakhe ebuhlungu Aksinya.
Yini angayenza ukusiza uma alinikwa ukuba anqobe uthando lwakhe umakhelwane? Yebo, isithombe angabonisa umuntu ngaphandle, kodwa umbukeli uyakwazi bagxuma isithombe "ikhanda." Ingani ku- Gregory Melehova kufanele kube yimuphi umuntu self-ukuhlonipha. Umndeni wakhe babengamazi indlala, ngisho nempi. Esikhathini izikhathi ezimbi kakhulu futhi iyingozi Melekhov asekelwe futhi wakhuthaza bonke. Ekhaya, edolobhaneni Cossack, yena kuyahlonishwa. Unkosikazi uyalithanda, ngeke uthole ngokwanele ngakho. Yini okungekho ngoba impilo elokuthula?
It ayikwazi ukususwa kusukela izinhliziyo umakhelwane wakhe Gregory. "Epholile Flows Don" - ngempela umsebenzi sina owembula Simoni protagonist. Uyacabanga yazalwa ngowesifazana, ngisho nalapho izinhlamvu amakhwela phezu kwekhanda lakhe. Umuntu angawathola kanjani indlela, ngoba wonke umuntu angakwazi ukuthola ulwazi mayelana yona mukela imizwa yakhe? Ingabe Cossack eqinile ukhohlwe Aksinya bese ubuyela emndenini?
Kudlalwé Kulindeleke kakhulu onyakeni
Omunye imisebenzi enkulu ezincwadini isiRashiya inoveli "Futhi epholile Flows Don" Mihaila Sholohova. Lo msebenzi oye wamlethela udumo emhlabeni wonke nothando abafundi.
Ukukhumbula lesi sithombe 50 Gerasimova, ayeke futhi ugxile TV ifilimu serial "epholile Flows Don" (umqondisi Sergei Ursulyak), okuyinto, ngaphandle kokwesaba bokubanga ngokweqile, angabizwa ngokuthi kwesizini kulindelwe kakhulu ngonyaka odlule.
Ngokokuqala sesine le ezincwadini inoveli. Eyokuqala senziwe 1930 - ifilimu Gerasimov yakhiqizwa inguqulo yakhe zokufunda 1957. Futhi ngo-1992, umbono wakhe umkhiqizo yabonisa Sergei Bondarchuk emsebenzini wakhe yakamuva. Ukufakwa ubelokhu ekwenza indodana yakhe - Fyodor.
Uma eminyakeni eyishumi
Umqondisi we ifilimu "I epholile Don" Ursulyak eqiniseka ukuthi eqinile futhi ezinkulu ezifana isebenza ngokuphelele kufanele ifilimi kanye eyishumi. Lapho-ke yilowo isizukulwane lempumelelo bazokwazi ukuthola yona futhi. Futhi ngendlela entsha ukuqonda zonke izenzakalo ezenzeka Amakhasi. A "epholile Flows Don" sango-2015 kuyinto ngempela onekhono ukuze uvuselele isithakazelo inoveli, buyela incwadi ngokuya ingxoxo.
Izibuyekezo of the movie "The epholile Don" ikakhulukazi omuhle. umdlalo Pretty ezinhle abadlali ophoqelelwe ukubukela indaba umoya. Kodwa nakhu endaweni ukudubula is anginikhethanga kahle. Yiqiniso, lesi sithombe ngeke kusize ukuqhathanisa nabantu ezidumile abathandwa ifilimu. Noma kunjalo, abadali sakwazi ukususa bebodwa, ngokungafani abanye, okufana. Le filimu "I epholile Don" sango-2015 ungabuka futhi kudingeka okungenani ngoba IBamba kuhle kungamboza ububi. Mhlawumbe kancane Makovetskii ivelele kusukela iqembu, ngoba ngisho makeup ke - liphinyiselwe Makovetskii.
Izibuyekezo of the movie "The epholile Don" sisekele abadlali abasha. It yona umbono wukuthi ebulalayo umlingisi handsome odlala Gregory Melehova, kunzima ukubiza. Kodwa umsebenzi umlingisi Yevgeny Tkachuk ubukeka ngempela ehloniphekile.
"Epholile Flows Don" ngo-1958 ukukhululwa izici esimweni esikhulu esibuhlungu. Mhlawumbe kungenxa yokuthi umqondisi kancane aphambuka inoveli uqobo. Kodwa Sholokhov esebenzisa ithalente lakhe elimangalisayo, wakwazi ukwenza noveli naleyo nhlekelele yangempela. Ngamunye izinhlamvu has lizenzele umhlahlandlela walo, ubuhlungu ayo, amaphupho abo.
Ukuhambisana wazibonakalisa olunembile. Nokushutha isithombe kwenziwa kulezo zindawo lapho kwakukhona izenzakalo wangempela kulwiwa. Izibuyekezo of the movie "The epholile Don" Gerasimov ukuthi umbhali yena eyayihilelekile inqubo Ukukhetha ithimba. Cishe kusukela imizuzu yokuqala yokubuka nabalingisi ingabonakali - izethameli avele Okuyınqo, amaqhawe yangempela leyo minyaka. Sergey Gerasimov, yebo, zonke izinhlelo zethu kuphumelele. Le filimu "epholile Flows Don" ngo-1958 ukukhululwa - kungcono iphethini enamandla ukuze ukwazi kalula bazizwa emkhathini we ukuphila Don Cossack.
Sergey Ursulyak. Ukuzalwa wobuciko entsha noma ngomzamo ukukopisha eyodwa ubudala?
Ukuze ususe wesine ifilimu lithathelwe "epholile Flows Don" inembe kunazo nokuyiqiniso, nabalingisi yini izisulu: amadoda ukugibela ihhashi ku sehhashi kuya ubuhlungu emilenzeni, futhi abesifazane baye bafunda asenge amankomazi, ukuthi kwakulula kakhulu. Sergeyu Makovetskomu, owawusekelwe esikrinini isithombe Melehova abaphezulu ngisho indlebe abamhlaba ngempela, ngoba ungumkhohlisi icici engafuni ukuhlala. Naye ngamalanga amahora amane isicelo makeup eyinkimbinkimbi. Ngenxa yobuciko kwadingeka akhuthazele. Yebo, ngithi kini futhi wabalwela sangempela, ukuthembeka okwenzekayo.
Lesi sigameko senzeke endaweni Rostov esifundeni. Abalingisi kwesokunxele, ukugcwalisa esiqala emihle kuphela. Bakhumbula ukuthi wokungenisa izihambi kwakungamadodana bendawo, abasebenzisa njalo sizama ukujabulisa nezisebenzi ngento esihlwabusayo. Sakhumbula yini enhle kwaba ogibele ihhashi ezizungeze. Phela, lo umlingisi Yevgeny Tkachuk, ababedlala indima Gregory Melehova usuvele unayo amahhashi amathathu. Ufuna ukuba amise yaseshashalazini Equestrian.
Lapha futhi wathwebula "I epholile Don". Ursulyak, umqondisi we ifilimu, ngiyaqiniseka ukuthi izilaleli ngeke bathande ifilimu yakhe kanye sinye, emuva ngo-1958, wanikeza ukufake ezinhliziyweni zazo ukuba ifilimu Sergeya Gerasimova.
Indlela zokusondelana ngokoqobo?
Entsha "epholile Flows Don", okuyinto kwaphuma ngaphansi ngothi umqondisi esikhathini esidlule, ngo-2015, wazama nokudubula ukuze izilaleli zanoma iyiphi iminyaka kwakuthakazelisa. Kubo bonke phezu isethi kwakuhambelana nokuka ngokoqobo, it uzama lokuphinda isimo ukuthi abakhona lapha ekuqaleni kwekhulu lamashumi amabili.
Shot eduze nedolobhana Veshenskaya ku Rostov esifundeni. Ngakhetha lo ndawo ngoba izenzakalo ezichazwe inoveli Sholokhov sika senzeka kula mazwe.
Ukulungiselela kuthatha lemali eside. Kuphela indawo ukuze ukuqopha Yakhiwa esingangonyaka. Zonke izinto ngaphandle okuyinto akunakwenzeka ukucabanga ngokuphila kwansuku zonke izikhathi - ingilazi, waphonsa yensimbi okuzikhulula, amabhokisi, thimbles, amakhethini - imvuthuluka eqoqwe eminyuziyamu, abaqoqi, wancenga abantu bakule ndawo.
Entsha "epholile Flows Don" Kungase sengathi "unqobe" inkazimulo isithombe, kuthathwe ezingaphezu kwesigamu eminyakeni eyikhulu edlule. Phela, ngisho abadlali abaye bafunda ukukhuluma kahle, ukuhamba, ukuhleka, abhapathizwe. Ngakho ukuthi izilaleli akazisolanga sikhatsi lesisetjentiswe esibukweni TV ukubuka lokhu, lokuphinda emkhathini we abadlali base cishe aguqule ibe nezinhlamvu zabo. Zonke amalungu eqembu kwadingeka ukuba ugibele izifundo, ngoba Cossacks ngaphandle ihhashi, ufana nabantu abavamile, isibonelo, ngaphandle isandla.
Ukuze bacibishele kuyingozi kakhulu zihlanganisa umlilo, lapho Mihail Koshevoy (umlingisi Alexander Yatsenko) usetha umlilo endaweni. Ukuqopha umlilo yangempela. Buildings enanikade ezenziwe ngokjuni, bona babehilelekile umlilo ngokushesha, ngakho ukudubula eziningana kuthatha kwakungenakwenzeka.
Yilokho waphenduka ifilimu "epholile Flows Don". Abadlali kanye izindima bavumelana ngokudlala, babe obukholisayo kakhulu, iqiniso futhi eqotho. Sergei Ursulyak ifilimu usenayo iphathelene isimo, lapho bonke abantu bakhathele kakhulu yokulwa nangombango ushintsho njalo nemibono. Cishe, akunakwenzeka ukuba ifilimu kuyoba njengoba ukuthandwa njengoRaheli Sergei Gerasimov eteyipini, kodwa lokho kalula akwazi ukudlula zonke ezinye izinketho lithathelwe ifilimu ka "epholile Flows Don", akunakungatshazwa.
The best Russian opopayi: ukubuyekeza
Umlingisikazi Daria Moroz: Biography, imisebenzi kanye nemindeni
Umlingisi Russian Nikita Panfilov: Biography, empilweni yakho kanye umsebenzi
Concealer "Max Factor": ukubuyekezwa. Indlela yokusebenzisa concealer "Max Factor Mastertach" (Max Factor Mastertouch)?
Ungangenisi amanzi of izisekelo: ezinye izindlela
Umsebenzi - kuyini?